गोंगबुमा आफ्नै श्रीमानको टु’क्रा टु’क्रा गरि ह’त्या गर्ने कल्पना मुडभारीलाई आजीवन का’रावासको स’जाय…. – SUDUR MEDIA
March 3, 2021 AdminLeaveaComment on गोंगबुमा आफ्नै श्रीमानको टु’क्रा टु’क्रा गरि ह’त्या गर्ने कल्पना मुडभारीलाई आजीवन का’रावासको स’जाय….
आफ्नै श्रीमानको वि.भत्स ह.त्या गर्ने महिलालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले आ’जीवन का’राबासको स’जाय सुनाएको छ । गत साउन महिनामा काठमाडौँको गोंगबु स्थित डेरा गरि बस्ने कल्पना मुडभारीले आफ्नै श्रीमान कृष्णबहादुर बोहराको ह’त्या गरी सुटकेशमा राखेर फ्याकेकी थिइन ।
कल्पनाले रोल्पा रून्टीगढी गाउँपालिका-७ घर भई गोंगबु स्थित एक होटलमा बस्दै गरेका ४५ वर्षीय बोहोराको ह.त्या गरी टाउको, खुट्टा का.टेर सुटकेसमा राखी फ्याकेकी थिइन्। सुटकेस फ्याक्न सहयोग गरेको भनिएकी छोरीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । फागुन १३ गते न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले उनलाई आजीवन का’राबासको सजाय सुनाए ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः नेकपा एकता अभियानका पक्षमा गैँडाकोटमा कमिटी ! नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजन भएपछि अर्को एक समूहले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएको छ । मङ्गलबार गैँडाकोटमा भेला हुनुभएका अभियानका केन्द्रीय सदस्य यदु सिग्देललगायत नेकपाका नेताहरुले कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मध्यमार्गी वामदेव गौतम समूहका पक्षमा गैँडाकोटमा १७ सदस्यीय नगरस्तरीय कमिटी गठन गरिएको छ । नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजकमा बाबुराम खनाल र सचिवमा नेत्रप्रसाद अधिकारीलाई चयन गरिएको हो ।
झलककाजी पौडेलका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान केन्द्रीय कार्यसम्पादन कमिटी सदस्य एवं नवलपुर जिल्ला इञ्चार्ज दुर्गा भण्डारीले पार्टी विखण्डन आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने जनाउँदै सबै कम्युनिष्टबीच एकता हुनुपर्ने बताउनुभयो । एकता पक्षको जिल्ला कमिटी आज गठन गरिने जनाइएको छ । यसअघि जिल्लाका कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकामा समेत अभियानअन्तर्गत एकता अभियानको कमिटी गठन भइसकेको छ ।